IDts NeNestle Zigcina Ubudlelwano Obuhle Bokubambisana Iminyaka Eminingi. | Shandong Dingtaisheng Imishini Technology Co., Ltd.
IDts NeNestle Zigcina Ubudlelwano Obuhle Bokubambisana Iminyaka Eminingi.
IDts NeNestle Zigcina Ubudlelwano Obubambisanayo Obuhle Iminyaka Eminingi.
Ngo-2008, ama-dts ahlinzeka ngokuhlanzelwa kwamanzi okugcwele okugcwele embonini yase-nestle qingdao e-china ekukhiqizeni ubisi olushubile olusemathinini. Ishintshe ngempumelelo uhlobo olufanayo lwemishini eyenziwe eJalimane. Ngo-2011 ama-dts ahlinzeka ngamasethi ayi-12 ama-dts-18-6 ama-rotary sterilizers ku-jinan yinlu (amandla angama-600cpm) ekukhiqizeni i-congee exubile.
Ngonyaka ka-2012, ama-dts ahlinzeka ngamasethi ayi-10 ama-dts-16-6 amanzi ahlasela ama-sterilizers ku-hubei yinlu (amandla we-1000cpm) ekukhiqizeni okuyinhloko kwekhofi ekheniwe (nescafe) ku-yinlu-joint venture yinlu.
Ekupheleni kuka-2012, ama-dts ahlinzekela amasethi ama-sterilizers wohlobo lwe-dts-13-4 ku-xiamen yinlu (umthamo wama-600cpm) wokukhiqiza okuyinhloko kwe-nescafe ekheniwe nobisi lwamantongomane.
Ku-2013, i-dts isayine isivumelwano sokuhlanganyela sokwenza ucwaningo ne-nestle beijing r & d ukwenza umkhiqizo omusha osethinini (i-congee esheshayo esitsheni) unyaka owodwa.
Ngo-2014, ama-dts ahlinzeka ngeqoqo le-batch sterilizer ngokuzenzekelayo ku-xiamen yinlu (umthamo we-1200cpm) wokukhiqiza okuyinhloko kwe-nescafe ekheniwe nobisi lwamantongomane. Uhlelo lolu luhlanganise ama-4 we-spray spray retts dts-18-6, ukulayishwa okuzenzakalelayo nokuthulula imishini yebhasikidi kanye nama-conveyors.
Ngo-2015, ama-dts ahlinzeka ngamasethi ayi-10 ama-dts-14-4 amanzi okugcoba amanzi ku-xiamen yinlu (umthamo we-1000cpm) ekukhiqizeni itiye eliyikhambi.
Ngo-2016 ama-dts anikezela ngamasethi ayi-6 ama-dts-18-6 ama-rotary sterilizers ku-jinan yinlu (amandla we-600cpm) ekukhiqizeni i-congee exubile.
Ngo-2019 kungenzeka ama-dts abambisane ne-turkey gonenli nestle oem factory ngempumelelo futhi asevele efakiwe ekukhiqizeni.
Ngo-2019 september dts babambisana ngempumelelo ne-sri lanka ceylon isiphuzo nestle oem factory ngempumelelo.
Ngo-2019 udisemba abambisana nefektri yaseMalaysia nestle nihong ngempumelelo.